REENOEMANN: ( ၂ ) နှစ်ပြည့် သွားတဲ့ ရီနိုမာန်
Posted by Ree Noe Mann at 12:15:00 AM
နောက်ထပ်နစ်တွေမှာလဲ ဆက်လက်ပြီးတော့ ရေးချင်တာတွေ ရေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်း........... အမြဲပျော်ရွင်နိုင်ပါစေ။
Happy Blogging and many returns of this day!
နှစ်ပေါင်း ၂၀ မက
နှစ်ပေါင်းများစွာ အဓွန့်ရှည်ပါစေ လို့ဆန္ဒပြုရင်း
မတွေဝေနဲ့ ၊ နောက်လှည့် မကြည့်နဲ့ ..။
ဘလော့ ရွာကြီးက ဘောင်ခပ်မထားပါဘူး..။
စာတွေကို ရေးပဲ ရေးချင်နေတဲ့မောင်နှမတွေ
နေထိုင်ကြတဲ့ရွာကြီးမှာ ဘယ်လိုစာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်
ကိုယ့်ရင်ကို တင်း လာရှိရင် ချ သာရေးပါလေ..။
၂ နှစ်မှ စိတ်ရှိသလောက်ရေးနိုင်ပါစေ....
စိတ်ရှိသလောက် စိတ်တိုင်းကျသာရေးပါ ကိုရီနိုမန်ရေ
ကျွန်တော်လည်း စိတ်တိုင်းကျသာ ဖတ်ပါး)
Happy Blog Birthday!!! ပျော်ရွှင်စွာ ဆက်လက်ရေးနိုင်ပါစေ။
နှစ်နှစ်သား ကလေးကြီးကို ဂုဏ်လာပြုပါတယ် ... :-)
ကျနော့်ရဲ့ဘလောဂ့်လေး ၂ နှစ်ပြည့်အတွက် လာရောက်ဆုတောင်းပေးသွားကြတဲ့ အကိုတွေ အမတွေ အကုန်လုံးကို ကျနော်က ကျေးဇူးလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ တင်ရှိပါတယ်။
Happy 2Years Anniversary...
ပါးစပ်က ပြောတာတွေက ကြာလာရင် မေ့သွားနိုင်ပေမယ့်၊
စားသားတွေကတော့ ကိုယ့်စိတ်ရဲ့ကြေးမုံတစ်ချပ်ပေါ့။